Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: November 2011
အန်အေဲလ်ဒီပါတီတင်ခြင်းမတင်ခြင်း၊ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဟာတိုင်းရင်းသားများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစုံတရာရှိသော်လည်းတိုင်းရင်းသားအရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့်ပွဲမဟုတ်သေး၊စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အရေးအတွက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဖော်နိုင်သည်သာအဓိကဖြစ်သည်၊အကယ်၍တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘဲဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကျင့်သုံးလာခဲ့သည့်၊ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်သည့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊လွတ်လပ်မှုမတူညီမှု၊တန်တူရည်တူမရှိမှု၊ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုများကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမည်ဆိုရင် စစ်သူရဲကောင်နယ်နိမိတ်(warrior territory) သတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို.ဘဲရှိသည်၊ကျုပ်တို.အသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာကိုစတေးခဲ့ပြီးပြီ၊မျိုးဆက်ပေါင်းများစွားကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီ၊ကျုပ်တို.အခွင့်အရေးအတွက်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှလာပြီးခြိမ်းခြောက်တာမျိုး၊မလိမ်တပတ်လှည့်ဖြားတာမျိုး၊ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာမျိုးတို.ကိုလုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
အင်သပ်ဘွမ်တိုက်ပွဲတွင်ဗမာစစ်သား ၂၀၀ နီးပါးသေဆုံး၊၂၀၀ နီးပါးဒဏ်ရာရရှိ၊ကေအိုင်အို ၂၀ ခန်.ဒဏ်ရာရ
အင်သပ်ဘွမ်းဟာ မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော်လမ်း ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီးကေအိုင်အေနဲ.ဗမာစစ်တပ်တို.ကဆက်တိုက် ၄ ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာဖြစ်ပြီးကေအိုင်အိုဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ.လည်းနီးစပ်သည်၊အင်သပ်ဘွမ်ကိုဗျူဟာကျသည့်တောင်တန်းစခန်းဖြစ်တာကြောင့်၎င်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ဗမာစစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ၊ဒီကနေ.နောက်ဆုံသတင်းအရအင်သပ်ဘွမ်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ဗမာစစ်သားအင်းအားတစ်ထောင်လောက်ကိုကေအိုင်အေကဝိုင်းရံပိတ်ဆို.တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အင်သပ်ဘွမ်တောင်မှကစဉ့်ကလျားထွက်ပြေးကြပြီးလက်နက်ခဲယမ်းမြောက်များစွာကိုစွန်.ပစ်ထားခဲ့ပြီးကေအိုင်အေတပ်လိုက်လံသိမ်းဆသည်နေသည်ဟုသိရှိရပါသည်၊
Burma Army faced heavy casualties in recent days
The Kachin Post / Nov 17, 2011
Hundreds of Burma Army soldiers were gunned down by Kachin Independence Army (KIA) during the last few days of battle in two different locations in Kachin State of northern Burma, frontline source said.
No less than two hundred Burmese troops encounteredadeadly tragedy and other couple hundreds were wounded at N’tap Bum location, closed to KIA headquartered Laiza, and the other location at KIA’s stronghold Lahpai post on Waimaw-Kampaiti road. About twenty KIA soldiers were wounded and no casualty at N’tap Bum battle ground, the source said.
At leastathousand Burmese troops involved in fighting with KIA in two different offensive locations. Since early of November, Burma Army intensified its military operation against KIA, sending most of its combat force from nation-wide and tons of ammunitions & rations, as well as using poison-gas embedded mortar shells against KIA.
Recently, KIA drove out Burma Army from N’tap Bum, where Burmese troops faced at leastacouple of failed attempts with heavy lost. Meanwhile, the wounded Burmese troops from troops from light infantry division 88, which intruding along the Waimaw-Kampaiti road, were sent back to public hospitals. However, private hospital and clinic forced to allow giving medical treatment as public hospitals in Myitkyina and Waimaw have no more rooms and shortage of medical practitioners.
ကချင်တပ်မတော်နဲ.တိုက်ပွဲတွင်ဗမာစစ်သား ၁၄၀၀ ကျော်ကျဆုံး၊ကချင်တပ်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်ပိုမိုပြင်းထန်သည့်ဓါတုလက်နက်ထုတ်လုပ်ရန်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်းညွန်.ကြားထား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အေ အစိုးရနှင့် ဗမာစစ်အစိုးရတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၉) ရက်ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်း ဗမာစစ်အစိုးရဘက်မှ စစ်သား (၁၄၀၀) ကျော်ကျဆုံး (သေဆုံး) ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဤစာရင်းတွင် စစ်ပွဲ၌ ဒဏ်ရာရရှိပြီး စစ်မြေပြင်သို့ပြန်လည်းမသွားရောက်နိုင်တော့ သောစစ်သားများမပါရှိကြောင်း ဗမာစစ်ဗိုလ်များ အထက်သို့ပေးပို့သော ကြေးနန်းမှ ဖမ်းယူရရှိသော သတင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဗမာစစ်အစိုးရဟာ ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အေ အစိုးရနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ရှုံးနိမ့်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်လာရသောကြောင့် နိုင်ငံတကာက ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့ ဓါတုလက်နက်ကို အသုံးပြုပြီး ကေအိုင်အေ ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အမှတ် (၁၂) လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်စက်ရုံတာဝန်ရှိသူများကို ပိုမိုပြင်းထန်သော ဓါတုလက်နက်များကို ထုတ်လုပ်သွားရန် ညွန်ကြားထားကြောင်းလည်း စစ်တပ်နှင့်နီးစပ်သည့် အတိုင်းအ၀ိုင်းများမှ သိရှိရပါသည်။ ညစ်ပတ် ကောက်ကျစ်၍ စိတ်ဓါတ်ညံ့ဖျင်းသော၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ညင်းပန်း နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်သော ဗမာစစ်အစိုးရကို တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး လက်တွဲညီညီ တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားကြပါစို့လို့အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။
BURMESE NO (12) CHEMICAL WEAPON FACTORY
Burmese military is unable to defeat mighty Kachin Independence Army(KIA) with current strategy and weapons, thus Burmese army commander "Thura Min Aung Hlaing" has instructed Burmese CHEMICAL WEAPON factory (12) to produce higher grade Chemical bombs and weapons to use in battle against Kachin Independence Army(KIA).
Although the location of this Chemical Weapon factory is still unknown, it's very clear that current Chemical Weapon and bombs used in battle against Kachin Independence Army(KIA) is products of this factory. Therefore people from all Ethnics groups must find out together the location of Burmese army's Chemical Weapon Factory Location with all efforts and support.
This is to show your care and support for your own people as well as KIA, if you have any information or location of this factory please do share with us or email us. We should let the whole world know about Burmese army's Chemical Weapon factory No in order to stop production and stop using this Chemical Weapon against Kachin Independence Army(KIA) or Kachin people.